Wararkii ugu dambeeyay: Jabhadda Tigray oo sheegtay in ay Jaxiimo udirayso ciidamada Abiy Axmed.
0 Thursday November 19, 2020 - 13:53:26
Melleteriga Itoobiya ayaa sheegay in ay qarka usaaranyihiin qabsashada magaalada Maqalla ee caasimadda u ah ismaamul goboleedka Tigreega.
0 Thursday November 19, 2020 - 10:23:11
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax khasaara badan dhaliyay lagu beegsaday ciidamo katirsanaa Xabashida Itoobiya.
0 Thursday November 19, 2020 - 10:19:50
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar culus oo lagu qaaday mid kamida saldhigyada ciidamada gummeysiga Kenya ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose.
Qarax khasaare dhaliyay oo ciidamada dowlada lagula beegsaday deegaanka Lafoole.
0 Thursday November 19, 2020 - 10:18:15
Khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay qarax aad u xooggan oo ciidamo katirsan dowladda Federaalka lagula beegsaday deegaan dhaca galbeedka Muqdisho.
0 Thursday November 19, 2020 - 09:13:22
Maamulka Aala Sacuud iyo dowladda Shiicada Ciraaq ayaa kala saxiixday heshiis dhanka amniga ah saacado kadib markii dib loo furay marin xuduudeedka labadaas dowladood kala qeybiyo oo xirnaa waxkabadan 30 sanadood.
0 Thursday November 19, 2020 - 09:02:51
Caabuqa Covid19 ayaa gummaadkii ugu darnaa ka geystay magaalooyin iyo gobollo katirsan wadanka Mareykanka ee dhaca waqooyiga qaaradda America.
Askar iyo Saraakiil Tigree ah oo lagu xiray Koonfurta Soomaaliya.
0 Wednesday November 18, 2020 - 17:49:00
Hardanka udhaxeeya qowmiyadaha Amxaarada iyo Tigreega ee ka holcaya dalka Itoobiya ayaa saameyn xun ku reebay ciidanka melleteriga Itoobiya.
Cumar Carte Qaalib oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa.
0 Wednesday November 18, 2020 - 17:40:25
Magaalada Hargeysa ee xarunta gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya waxaa ku dhintay siyaasi ruugcadaa ahaa oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii hore.
0 Wednesday November 18, 2020 - 17:29:13
Waxaa meel sare gaaray loollanka melleteri ee isbuucii sedaxaad oo xiriir ah kasii socda waqooyiga iyo galbeedka wadanka Itoobiya, isdilka udhaxeeya ciidamada Xabashida ayaa aad sare ugu kacay waxaana lasoo tabinayaan dhacdooyin cusub.
0 Wednesday November 18, 2020 - 13:33:04
Kadib isbuucyo ay socdeen dibad baxyo waaweyn oo muslimiintu ay ku difaacayeen Nabiga SCW ayna ugasoo horjeedeen dowladda saliibiyadda Faransiiska ayay ugu dambeyn dowladda Pakistan ogolaatayn in ay erido safiirka faransiiska.
0 Wednesday November 18, 2020 - 09:37:06
Kolonyo katirsan ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa qarax aad uxooggan lagula beegsaday mid kamida xaafadaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
0 Tuesday November 17, 2020 - 15:22:02
Jugta qarax aad uxooggan ayaa maanta duhurkii laga maqlay inta badan xaafadaha degmooyinka XamarJajab,Waaberi iyo Xamarweyn kaasi oo lagu beegsaday saldhig ciidan.
0 Tuesday November 17, 2020 - 09:16:04
Hoggaamiyaha waqtigiisu sii idlaanayo ee dalka Mareykanka ayaa markale soo saaray amarro faraya saraakiishiisa wasaaradda difaaca in kumanaan kamid ah ciidamada American-ka lagasoo saaro wadamada caalamika Islaamka.
0 Tuesday November 17, 2020 - 09:11:04
0 Tuesday November 17, 2020 - 08:05:18
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya fal dil ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan katirsan gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
Dad ku barakacay dagaallada Itoobiya oo gaaray 25 Kun.
0 Monday November 16, 2020 - 11:30:42
Wadanka Suudaan ee dhaca bariga qaaradda afrika waxaa kusii qulqulaya kumanaan kun dad qaxooti barakacayaal Itoobiyaan ah kuwaas oo kasoo firxaday dagaal culus ee ka socda waqooyiga wadankasi.
0 Monday November 16, 2020 - 11:23:21
Waxaa si lama filaan ah u geeriyooday mid kamida tiirarkii uu ku taagnaa nidaamka Nuseyriga bishaar al-asad ee ka jira wadanka suuriya oo dhaca mandqadda shaam.
0 Sunday November 15, 2020 - 16:22:16
Wadanka Itoobiya waxaa wali kasii socda weerarada dhiigga faraha badan ku daadinayay ee ay isku geysanayaan dadka Xabashida ah.
0 Sunday November 15, 2020 - 16:06:34
Caabuqa Covid19 ayaa gummaad daran wuxuu wali ka geysanayaa dalka Mareykanka xilli dadka american-ka ay ku mashquulsanyihiin natiijadii kasoo baxday doorashooyinkii madaxtinimo ee dhowaan dhacay.
0 Sunday November 15, 2020 - 11:04:01
Xoogag Jihaadi ah oo si nabad gelya ah kula wareegay deegaanka Ceeldheere.
0 Sunday November 15, 2020 - 07:51:34
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo bartamaha dalka Soomaaliya ciidamada wilaayada Islaamiga Galguduud ayaa la wareegay deegaanno dhowr ah.
Jabhadda Tigreega oo duqeysay Magaalada Asmara ee dalka Ereteriya.
0 Sunday November 15, 2020 - 07:01:48
Wararka ka imaanaya wadanka Ereteriya ayaa sheegaya in qaraxyo xooggan ay ka dhaceen magaalada caasimadda ah ee Asmara.
Mareykanka oo ciidamadiisa dibadda ku maqan ugu baaqay in ay dib ugu laabtaan guryahooda.
0 Saturday November 14, 2020 - 20:40:23
Dowladda Mareykanka ayaa qorshaynaysa in ay ciidamadeeda kala baxdo qaar badan oo kamid ah wadamada caalamiga Islaamka ee ay duullaanka ku qaaday 19 sano ka hor.
Tigreega oo sheegay in hub culus uu u adeegsan doono dagaalka uu kula jiro ciidanka Abiy Axmed.
0 Saturday November 14, 2020 - 17:42:54
Maamul goboleedka Tigray ee ka dhisan waqooyiga dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in waji cusub uu uyeeli doono dagaalka culus ee kala dhaxeeya ciidamada Abiy Axmed.
Dowladda Itoobiya oo la sheegay in ay labaxayso qaar kamida ciidamadeeda Soomaaliya ku sugan.
0 Saturday November 14, 2020 - 09:36:49
Dowladda Xabashida Itoobiya oo cadaadis melleteri kala kulmaysa Jabhadda TPLF ayaa bilaawday in ay labaxdo qaar kamid ah ciidamadeeda xoogga ku haysta dalka Soomaaliya.
0 Saturday November 14, 2020 - 09:34:09
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar hubaysan oo ka dhacay deegaan hoos taga magaalada Mandheere ee dhulka Soomaalida NFD.
0 Saturday November 14, 2020 - 09:30:31
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in weerar khasaare dhaliyay lagu qaaday ciidamo katirsan maamulka isku magacaabay Hirshabelle ee wadashaqeynta laleh ciidamada shisheeye.
Qaraxyo ruxay magaalooyin katirsan Ismaamulka Amxaarada Itoobiya.
0 Saturday November 14, 2020 - 07:17:00
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in qaraxyo xooggan ka dhaceen labada magaalo ee ugu waaweyn dhulka ay degto qowmiyadda Amxaarada.
0 Thursday November 12, 2020 - 21:33:48
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax aad uxooganaa oo caawa fiidkii ka dhacay mid kamida degmooyinka gobolka Banaadir.
Baarlamaanka Itoobiya oo Xazaanadda ka qaaday 39 Mas'uul Tigree ah.
0 Thursday November 12, 2020 - 13:33:15
Kadib kulan ay magaalada Addis Ababa ku yeesheen xildhibaannada baarlamaanka dowladda Xabashida Itoobiya ayay kasoo saareen go'aammo sii adkaynaya xiisadaha siyaasadeed ee wadankaas ka jira.
0 Thursday November 12, 2020 - 13:31:09
Dagaalyahannada Al Shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro khasaare dhaliyay ka fuliyay deegaanno dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
0 Thursday November 12, 2020 - 12:24:41
« Prev1 ... 78910111213 ... 383Next »